China Fuel Tanker API Camlock Coupling samandla mveliso kunye nabenzi | Jiasheng
Iadaptha ye-Gravity Drop ye-API yenzelwe ngokukodwa ivelufa ye-API kunye nesihlanganisi,
Ukuchitha ngokufanelekileyo uyilo lwe-engile ye-oblique ilungele amandla okwehlisa amandla okwenza ukothula izinto ezicocekileyo kwaye zikhawuleze, inokukhusela ityhubhu ethambileyo ukuba ingagobe xa usothula.
I-coupler yabasetyhini kunye ne-oil drain valve iyahambelana nomgangatho we-API Rp 1004. Iyakwazi ukudibanisa ne-API coupler esemgangathweni. Ngonyango lwe-oxidation yonyango kunye ne-Stainless Steel, ukumelana nokubola okuphezulu, okuqinileyo kunye nokuhlala ixesha elide.
Igama lemveliso Umgangatho ophezulu we-API yeadaptha engenasici
Izinto eziphathekayo umzimba Yenziwe ngentsimbi eshayinayo
Ububanzi begama 4″ - 2.5 ″ / 4 ″ -3 ″ / 4 ″ -4
Ubushushu: -150 ° F ukuya + 250 ° F
Phakathi: ipetroli, iparafini, idizili, amanzi, njl
API Umxhubi weGravity
Iadaptha yeadaptha yeAPI lolona loyilo lubalaseleyo lweadaptha esezantsi ye-API ukuqinisekisa ukhuseleko kunye nokulayisha ngokukhawuleza nokukothula. Yenzelwe 'ngomlomo' wangaphakathi owenza unxibelelwano lube lula. Amaqabane ane-4 standard, API RP-1004 tank truck adapters.
Ukufakelwa ukwenza ukubuyisela umphunga.Kukho ubungakanani obuthathu (2.5 ″ 3, 4 ″) ukwanelisa ukhetho olwahlukeneyo.Ngaphakathi kuyilo lomprofeti kufanelekile xa kuvulwa iVapor Adapter Valve.Uyilo lweBrass Handle ukwenza iqhaga liqinile xa uqhagamshela iValve yeVapor Adapter.
I-Camlock coupler iphucula ukusebenza kakuhle xa ukothula ipetroli kwitanki. Uyilo oluyingqayizivele lulungele ukukhupha ukwenza ukukothula kuhlambulule kakhulu kwaye kukhawuleze. Khusela ngokufanelekileyo umbhobho ongagobanga. Ujongano lwababhinqileyo-lokudibanisa luyangqinelana neemfuno ze-API RP1004, zinokudityaniswa ne-API Coupler esemgangathweni.
1.Isibini esisezantsi somxhuzulane
I-Gravity Drop Coupler iphucula ukusebenza kakuhle xa usenza umsebenzi wokukothula. Uyilo lwe-engile ye-oblique ilungele ukukhutshwa komxhuzulane ukwenza ukothula izinto ezicocekileyo kwaye zikhawuleze. Khusela ngokufanelekileyo ithumbu aligoba xa usothula. Ujongano lwababhinqileyo-lokudibanisa luyangqinelana neemfuno ze-API RP1004, zinokudityaniswa ne-API Coupler esemgangathweni.
2. Isibonelelo kunye neempawu
* Unyango oluQinisekileyo: Umzimba wonke wevalve upasile inkqubo yokuqaqambisa ngokukodwa ukuphucula ubomi bayo benkonzo.
* Uyilo olusengqiqweni: Uyilo lwe-engile ye-oblique ilungele ukukhutshwa komxhuzulane kwaye ikhusele ngokufanelekileyo ithumbu lokukhupha.
* Ubungakanani obuhleliweyo: Ubungakanani bojongano luyilelwe ngokomgangatho we-API RP1004, ukumisa kunye nesihlanganisi se-API esiqhelekileyo.
* Ubunzima bokuKhanya: Umzimba ophambili wenziwe ngealuminium aluminium, ukukhanya ngakumbi kwaye komelele.
* Aluminium ingxubevange die-cast isakhiwo, unyango anodised.
* Umsebenzi wokutshixwa kweCam, ofakwe ngumatshini wokushicilela.
* 22.5 engile ezantsi ukunciphisa ukugcinwa kweoyile.
* Isibambo esenzelwe ngokukodwa ukutshixa senza uxhulumaniso olulula kunye nokutywina okuthembekileyo.
* Ikhamera kunye nokuhamba ngokukhululekileyo kususa ukungqubana kunye nokugoba, kulula ukudibanisa ngaphandle kwegrisi.
* Kulula ukujonga ukuhamba ngeglasi yokubona.
* Isetyenziselwa iitanki ezininzi zecandelo, ukulayishwa okuhlukeneyo kunye nokwehliswa kwamafutha ahlukeneyo.
* Idibana ne-API1004 esemgangathweni.
Izinto eziphathekayo umzimba ialuminiyam
Indlela yokuSebenza Oomatshini
Ukucaciswa 4 × 2.5 intshi, 4 × 3 intshi, 4 × 4 intshi
Ubushushu: -20 ~ + 70 ℃
Phakathi: Ipetroli, iparafini, idizili
Uyilo olulungileyo lweadaptha esezantsi ye-API yokuqinisekisa ukhuseleko kunye nokulayisha ngokukhawuleza nokukothula. Yenzelwe 'ngomlomo' wangaphakathi owenza unxibelelwano lube lula. Amaqabane ane-4 standard ″ API BR-1004 adapters tank.
Pin: Yenziwe ngentsimbi eshayinayo
1.Aluminium ingxubevange die-cast isakhiwo, unyango anodized.
2. Ukutshixa kweCam okusebenzayo, okufakwe ngumatshini wokushicilela.
3. 22.5 engile ezantsi ukunciphisa ukugcinwa oyile.
4. Ukuphatha uyilo ngokukodwa ekutshixeni kwenza uxhulumaniso olulula kunye nokutywina okuthembekileyo.
5. Ikhamera kunye nokuhamba ngokukhululekileyo kususa ukungqubana kunye nokugoba, kulula ukudibanisa ngaphandle kwegrisi.
6. Kulula ukujonga ukuhamba ngeglasi yokubona.
7. Isetyenziselwa amacandelo amaninzi amatanki, ukulayishwa okwahlukileyo kunye nokwehliswa kwamafutha ahlukeneyo.
8. Udibana ne-API1004 esemgangathweni.
Ubukhulu: 4 * 4, 4 * 3, 4 * 2.5
Indlela yokusebenza: Oomatshini
Uxinzelelo lokusebenza: 0.6MPa
Uluhlu lobushushu: -20 ~ + 70 ℃
Egqithileyo Coupler yokubuyisa umphunga
Okulandelayo: I-Valve yeAdapter yeAdv API
API Camlock Coupling samandla